FAMONOANA OLONA TELO MIANAKA : Nampidirina am-ponja vonjimaika ireo roalahy tompon’antoka
Raha tsiahivina, dia ny alin’ny alatsinainy 18 marsa hifoha ny talata 19 marsa no nisy namono tamin’ny fomba feno habibiana i Honorette 29 taona, bevohoka ny zanany faharoa sy ny zanany lahy antsoina hoe Kenzo. 17 avril 2019
Ireto farany izay vady aman-janakan’i Serenzo tanora mpandraharaha ara-toekarena monina ao Analankininina Hopitaly Be Toamasina.
Voatonontonona tamin’izao famonoana izao ny tovolahy antsoina hoe Tsilavina. Ity farany izay mpiasa tao amin’i Serenzo ihany nanao asana aide-chauffeur. Izy izay tsy hita popoka taorian’ny zava-niseho. Tsy nipetra-mora ny teo aniovon’ny polisim-pirenena. Ny alahady 7 avrily no voasambotra tany amin’ny Kaominina Manakana distrikan’Antanambao-Manampotsy i Tsilavina. Nifanome tanana tamin’ny fahatrarana azy ny polisy misahana ny heloka bevava eto Toamasina sy ny polisy ao Vatomandry. Tanàna Manakana, izay 80 km miala an’Antanambao-Manampotsy renivohitra. Nibaradaka avy hatrany i Tsilavina rehefa voasambotra. Nambarany nandritra izany fa nisy mpandrisika sy nanome loha ratsy izy. Izany Tantely izany no nanome loha azy. Ity Tantely ity izay mpifanolo-bodirindrina amin-dry Serenzo ao Analankininina Hopitaly Be ao ihany. Andro vitsy taorian’ny fahatrarana an’i Tsilavina, dia voasambotra i Tantely.
Ny antoandron’ny alatsinainy 15 avrily, nampiantso mpanao gazety ny lehiben’ny polisy misahana ny heloka bevava faritany Toamasina, Kaomisera Raelison Gerverin. Nambaran’ity farany fa niaiky ny heloka vitany i Tsilavina sy i Tantely.
Nomen’ny Kaomisera Raelison Gerverin ihany koa ny fanazavana azo avy tamin’izy roalahy tompon’antoka tamin’iny vono olona feno habibiana, izay namoizana ain’olona telo tao Analankininina iny. Sady nitondra vohoka mantsy i Honorette tamin’ny fotoana namonoan’i Tsilavina azy.
Ny alatsinainy 15 avrily no niakatra fampanoavana tao Toamasina izy roalahy ka samy voatazona am-ponja vonjy maika miandry ny fitsarana.
Toy izao ny fanazavana avy tamin’i Tsilavina sy Tantely :
Talohan’ny 17 marsa noroahin’ny mpampiasa azy i Tsilavina Nomenjanahary, 20 taona. Noho izy tsy mety ahitsy amin’ny fomba fiasa tsy mety. Ny alahady 17 marsa tonga tao amin’ireo fianakaviana nampiasa azy izy nifona sy nangataka ny mba hamerenana azy hiasa, saingy tsy nanaiky ilay ramatoa satria tsy mbola tao an-toerana i Serenzo vadiny fa tany ambanivohitra Ny alahady 17 marsa io ihany dia nankao amin’i Tantely mpifanolo-bodirindrina izy nilaza ny fandroahana azy.
Nampanantena fa hahita asa ho azy indray i Tantely
Ny alatsinainy 18 marsa dia nifampiresaka tamin’i Honorette i Tantely ny mba handraisana an’i Tsilavina aloha, alohan’ny hahitany asa. Tsy nanaiky mihitsy ilay ramatoa. Ny antoandron’ny alatsinainy 18 marsa nifanao fotoana teny amoron-dranomasina i Tantely sy i Tsilavina. Tany izy ireo no nanamboatra ny tetika rehetra amin’ny famonoana azy mianaka tao an-trano. Ny alatsinainy hariva dia nomen’i Tantely fanafody fampatoriana tamin’ny sakafo izy mianaka izay tsy nanampo na inona na inona.
Ny alina, natory tao amin’izy mianaka ihany ingahy Tsilavina mandra-pahitana hevitra. Tamin’ny 2ora maraina (talata 19 marsa), nofohaziny ilay ramatoa, nodarohany in-3 tamin’ny hidin-trano. Nandritra izany dia nikiakiaka i Kenzo 4 taona ka nakan’i Tsilavina sotro rovitra notsindrominy tamin’iny maromaro ka maty. Taorian’izay notaperiny ny ain’ilay ramatoa.
Naka ny finday roa i Tsilavina ary nitsoaka avy eo. Araka ny fitantarany hatrany dia natory tao bazary Ankirihiry izy, ny alin’ny talata 19 marsa. Ny alarobia izy no namarotra ireo finday roa nangalariny izay lafony 28.000 Ariary. Ny alarobia 20 marsa no nankany Ilak- Est Vatomandry i Tsilavina. Izy izay nahazo vola 10.000 Ariary tamin’i Tantely natao saran-dalana. Teo no nitsoaka tany anaty alan’i Manampontsy i Tsilavina ka io sarona tamin’ny alahady 7 avrily io.